Abaar ka jirta dalka Djibouti - BBC Somali
Abaar ka jirta dalka Djibouti
16 Oktoobar 2014
Image caption Maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka Nagaad ee Djibouti
Xoola dhaqatada dalka Jabuuti ayaa waxa soo wajahaysaa caqabad ah in ay helaan dhul ay daajiyaan xoolahodda, iyadoo uu sii yaraanayo daaqa, sababtoo ah roobabkii ayaana di'in saddexdii sano ee la soo dhaafay. Xaaladda waxaa sii adkaysay xaqiiqda ah in Jibuuti tahay dal guud ahaan qalayl ah.
Image caption Siciido Dharaar Aarre
Arrimahan ayaa waxa ay ku qaadeen xoola dhaqatada in ay gacmahooda ku quudiyaan xoolahooda sida geela iyo ariga oo ay u iibiyaan caws iyo biyo, waxaana intaas u dheer in sidoo kale laga doonayo in ay quudiyaan xubnaha qoyskooda.
Weriyaha BBC-da Abdirahman Koronto oo dhowaan booqday Jibuuti ayaa amuurtaasi warbixintan ka diyaariyey.
Maqal Kooxda xuquuqda aadanaha ee Hargaysa oo ka hadashay tacadiyada ka dhanka ah wariyayaasha
Kooxda xuquuqda aadanaha ee Hargaysa oo ka hadashay tacadiyada ka dhanka ah wariyayaasha
Maqal Haddii la jabiyay kooxda Daacish, Ciraaq maxay ku dambeyn doonta?
Haddii la jabiyay kooxda Daacish, Ciraaq maxay ku dambeyn doonta?
Maqal Hargeysa oo yeelatay maktabad ay 50kun oo buug taallo
Hargeysa oo yeelatay maktabad ay 50kun oo buug taallo
Maqal Jaamacadda Carabta sidee ayey uga jawaabi kartaa arrinta Qudus?
Jaamacadda Carabta sidee ayey uga jawaabi kartaa arrinta Qudus?